Huawei P9 मार्च २०१ 2016 मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ Androidsis
Huawei P9 मार्च २०१ in मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
यस समयमा यो पहिले नै थाहा छ कि Huawei मोबाइल बजार मा सबै भन्दा ठूलो निर्माताहरु मध्ये एक हो। यस कम्पनीले भर्खरका वर्षहरुमा धेरै बढेको छ र अलि अलि अलि धेरै प्रतिस्पर्धी बजारमा स्मार्ट मोबाइल फोनको बजार जस्ता महत्वपूर्ण स्थानहरू बनाइरहेको छ।
यो क्षेत्र मा यति धेरै मा पुगेको छ कि यसको आफ्नै देश चीन मा, यो एप्पल र Xiaomi संग मोबाइल उपकरणहरु को सबैभन्दा ठूलो निर्माता र सबैभन्दा धेरै बिक्रि गर्ने एक संग दैनिक लडिरहेको छ। यसको तथ्या it्कले प्रमाणित गर्दछ र यो हो कि, केहि दिन अघि चिनियाँ निर्माताले घोषणा गर्‍यो कि त्यसले विश्वभर १० करोड भन्दा बढी मोबाइल उपकरण बेचेको छ, निस्सन्देह ठूलो संख्यामा यस क्षेत्रका अन्य उत्पादकहरू पुग्न सक्दैनन्।
यस २०१ 2015 को बखत, Huawei ले Mate S वा P8 जस्ता धेरै चाखलाग्दो मोबाइलहरू सुरू गर्यो। यी टर्मिनलहरू आजका बजारमा अवस्थित उत्कृष्ट र हालका वर्षहरूमा चिनियाँ कम्पनीको विकासको प्रतिनिधित्व गर्ने टर्मिनलहरू हुन्। थप रूपमा, हुवावेले आफ्नो पहिलो नेक्सस, लाई सुरू गर्न सफल भयो Nexus 6P, यो अहिले सम्मको सब भन्दा राम्रो नेक्सस हो।
मार्च २०१9मा Huawei P2016?
तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ, निर्माताहरूले हामी प्रत्येक ब्राण्डको हालको प्रमुखको उत्तराधिकारी सुरूवात गर्न प्रयोग गरेका छौं। तसर्थ, P8 को उत्तराधिकारी, Huawei P9, पहिले नै चिनियाँ ब्रान्डको अफिसमा छ ताकि अर्को वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा यो बिक्रीमा रहनेछ। भर्खरका अफवाहहरूका अनुसार, उपकरण अर्को वर्षको मार्चको महिनामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र यस तरीकाले, उनीहरूले यसको पूर्ववर्तीसँग लगभग एक वर्षको भिन्नता लिनेछ।
जहाँसम्म विनिर्देशहरू सम्बन्धित छन्, P9 समावेश गर्दछ १.5,2..XNUMX इन्च स्क्रीन सम्भाव्यताका साथ यसको डिजाईन घुमेको छ। भित्र, यो एक चिनियाँ निर्माता आफ्नै प्रोसेसर हुनेछ Kirin 950,4GB को RAM, Nexus 6P मा जस्तै लेजर फोकसको साथ उपकरण र रियर क्यामेराको शरीरको एक पक्षमा फिंगरप्रिन्ट रिडर। यसबाहेक, सम्भव छ P9 संस्करण, नामको अन्तर्गत .6,2.२ इन्च स्क्रीन भएको Huawei P9 अधिकतम.
हामी वर्ष अन्त्य गर्दैछौं र उपकरणहरूका बारेमा पहिलो अफवाहहरू जुन बर्षको पहिलो क्वाटरमा आउने छ आउन शुरू भइरहेको छ। Huawei P9 ती मध्ये एक हो, त्यसैले हामी सम्भव भएसम्म सूचित हुनको लागि प्रत्येक चीजमा ध्यान दिनेछौं। Huawei एक कम्पनी को रूप मा विकसित र एक विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्माता को सिंहासन मा रहन जारी, मजबूत वर्ष शुरू गर्न चाहन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Huawei » Huawei P9 मार्च २०१ in मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
Scribblenauts असीमित मा तपाईले चाहानु भएको सबै कुरा कल्पना गर्नुहोस् र अन्वेषण गर्नुहोस्
Flappy सिर्जनाकर्ता स्विंग कोप्टर्स2जारी गर्दछ